I-china Isikhwama senja esikhipha insimbi yesiteshi semfucuza esinezimboni zabakhiqizi nabaphakeli | UShengrui
Isikhwama senja sokuhambisa imfucumfucu yensimbi esiteshini semfucuza enebhodi yezimpawu
Lesi siteshi semfucuza yezinja sinikeza ikhwalithi yokuqala ngezindleko zokonga. Inja yethu yesiteshi sesilwane iqukethe okungapheli, okungaholi, ibanga lezentengiselwano, amandla aphezulu e-Aluminium yensimbi. Luhlala isikhathi eside, luyasebenziseka, futhi luyabonakala kalula
Usayizi: 190cm H. Iphakheji: 1set / ibhokisi.
Lesi siteshi semfucuza yezinja sinikeza ikhwalithi yokuqala ngezindleko zokonga. Inja yethu yesiteshi sesilwane iqukethe okungapheli, okungaholi, ibanga lezentengiselwano, amandla aphezulu e-Aluminium yensimbi. Imfucumfucu eboshiwe ingahlinzeka ngomthamo wesitoreji se-10-Gallon futhi iza nesici esihlukile se-liner clamp, esenzelwe ukuvikela izikhwama ze-liner kanye nokuvikela noma yikuphi ukushibilika noma ukukhipha. Isiteshi ngasinye sesikhwama senja sifaka KONKE okuzodinga, kusuka kumiyalo elula ukuyifaka ekunikezelweni kwakho kokuqala kwezikhwama zokuthwala, uphawu lwesiteshi semfucumfucu yenja, futhi kungagcwaliswa kabusha i-liner ukuze uqalise! UNGALUTHOLI UKUSEBENZISA KAKHULU OKUDINGEKA!
Langaphambilini Metal key Rack & Inja Leash isiphanyeko
Olandelayo: ISIHANGI sendondo somgijimi
ukunethezeka okuphakanyisiwe kwenja yokudla isitsha isiphakeli esiphansi se-wate ...